Frank Lampard Oo Barbaro Ku Furtay Waayihiisa Tababaranimo Ee Chelsea Iyo Blues Bilaabtay Diyaar Garowga Xili Ciyaareedka Cusub. - Gool24.Net
Frank Lampard Oo Barbaro Ku Furtay Waayihiisa Tababaranimo Ee Chelsea Iyo Blues Bilaabtay Diyaar Garowga Xili Ciyaareedka Cusub.
Frank Lampard ayaa bilawday waayihiisa tababaranimo ee kooxdii uu halyayga ku soo noqday ee Chelsea kadib markii uu maalmo kooban kadib markii la magacaabay ay kooxdiisa Blues guul ka gaadhay kooxda reer Ireland ee Bohemians.
Frank Lampard ayaa barbaro ku furtay waayihii tababaranimo ee Chelsea laakiin iyada oo waliba ayna ahayn mid ay ciyaartoydii uu soo xushay qaab ciyaareed ahaan ku qanciyeen.
Lampard ayaa kulankan haystay ciyaartoy da’yar u badan inkasta oo ay jireen dhawr xidig oo khibrad leh wuxuuna fursadii ugu horaysay ku tijaabiyay xidigo badan oo ay suurtogal tahay in uu xili ciyaareedka cusub ku shaqayn karo haddii ay ismuujiyaan.
Lampard ayaa shaxdiisa ku soo bilaabay Danny Drinkwater oo aan magiciisa Chelsea waqti dheer lagu maqal kadib markii uu Maurizio Sarri gabi ahaanba ka saaray qorshihiisii Stamford Bridge.
Waxa kale oo uu Lampard fursad siiyay da’yar ah ka mid ahaayeen Ampadu, Gallagher iyo Kendy wuxuuna ahaa kulankii ugu horeeyay ee uu Lampard soo safay kooxdiisa Blues isaga oo doonayay in uu kulamada saaxiibtinimo ku sii kala barto awooda ciyaartoyda kooxdiisa.
Markii ay 8 daqiiqo oo kaliya socotay ciyaartii ugu horaysay ee uu Frank Lampard tababare u yahay kooxdiisa Chelsea waxaa goolka furitaanka u saxiixay Michy Batshuayi kaas oo magiciisa ku qoray xidigii ugu horeeyay ee Lampard ku soo dhaweeyay gool dhalinta Blues.
Michy Batshuayi ayaa nasiib u lahaa in Kenedy uu shaqo fiican soo qabtay isla markaana ayna darbadiisu gaadhin goolka Bohemians balse waxa uu Michy Batshuayi si fiican u dhamaystiray kubbada uu goolka hortiisa ku helay.
Halkan ka daawo goolkii uu Michy Batshuayi
Laakiin inta badan ciyaarta ayaa ahayd mid aan wax badan ayna kooxda Lampard ee da’yarta u badnayd ka samayn iyada oo kooxda Bohemians adkaysi badan muujisay isla markaana Blues u diiday in ay dhaliyeen goolashii badnaa ee ay markii hore ku fikirayeen.
Laakiin dhamaadkii ciyaarta iyada oo Chelsea guusha isa siisay isla markaana ay sugayeen in garsooruhu uu ciyaarta dhamaynayo ayay kooxda Bohemians keensatay goolka barbaraha ee ay ciyaarta ugu soo laabteen.
Kooxda Bohemians ayaa goolka barbaraha keensatay daqiiqadii 89 aad ee dhamaadkii ciyaarta waxanaa Lampard guusha uu ku taagnaa ka joojiyay Molley oo goolkan dhaliyay.
Chelsea ayaan helin waqti badan oo ay ku raadiso goolka labaad waxayna ugu danbayn ciyaartu ku dhamaatay barbaro 1-1 ah oo lagu calaamadin doono bilawga waayaha tababaranimo ee Lampard ee kooxdiisa Chelsea.